Trimble ayaa iibsaday Ashtech; Waxa aan filan karno - Geofumadas
Trimble ayaa iibsaday Ashtech; maxaan filan karnaa
Abriil, 2011 GPS / Qalabka
Warku ma aheyn mid la yaab leh, waqtiyadan oo shirkadaha waaweyni ay iibsadaan tartamayaashooda, isku duubnaadaan oo burburiyaan; laakiin aan shaki ku jirin waxaa nala rumaysan in ay dhici karto in ay la dhacdo shirkadda soo saartay qalabka aan isticmaalay ama ku jiray habka loo iibsado.
Ansixisadayda iyo saaxiib wanaagsan oo aan la wadaagno mawduuca, ma ahan in laga naxo. Waxay yihiin cawaaqibta gumaysiga iyo farsamooyinka lama huraanka ah ee qabashada, farsamada iyo farsamooyinka adeegga macluumaadka kartoonka. Waxba ma aha in la sameeyo habka ay ahaayeen marka la barbar dhigo dhamaan xarumaha (60 ee magaca 11). Waxyaabaha qaarkood ayaa ah in tartanka (kala qaybinta teknoolajiyada Shiinaha), ay ku jiraan saddexda weyn:
Laakiin mid kasta oo ka mid ah taariikhdaas waxay ka timaadaa taariikhda dheer ee soo-baxday oo muujinaysa sida dhismaha madaniga, kartoonka sawirada, sawir-yarida, sawir-qaadashada, GIS-ga iyo gaadiidka lagu darey farsamooyinka laysku haleyn karo. Horumarinta teknolojiyada CAD / CAM / CAE, kombiyuutarada, qalabka iyo Internetka ayaa lagu daraa isbeddel aad u xiiso badan.
Xaaladda Leica (Switzerland), waa dhaxalka kooxihii Wildlife ee aan ku isticmaalnay Jaamacada, taariikhda ka timid 1819, oo la xidhiidha soo saarista kamaradaha caanka ah ee Leitz. Soo-ururinta suuq-geynta, sawir-qaadashada sawir-gacmeedka iyo dareemo fog oo ay soo iibsadeen ERDAS iyo Nidaamka LH ee 2001 iyo, ER Mapper, Ionic iyo Acquis ee 2007.
Hadda Hexagon AB (Swedish) waa milkiilaha Leica, sida Geomax iyo dhawaanahan ayaa sidoo kale iibsaday Intergraph (2010).
Xaaladda Topcon (Japan), waxay ka timaadaa 1932; in 2000 Topcom iibsatay Javad; KEE 2006 iyo Sokkia ee 2008. Tallaabada xigta waxay noqon kartaa shirkad Shiinees ah, oo aan ku yarayn jawigeena, laakiin kobaca dhaqaalaha adduunka oo awood u leh in uu ka soo horjeedo Topcon oo laga xayuubiyay dalabaadka qaarkood.
Iyo kiiska Trimble, qaybta adduunkani waa mid aad u dhow (1978) laakiin la dagaalanka shirkadaha Waqooyiga Ameerika. Waxa uu lahaa xididada Hewlett Packard; 1990 waxay galeysaa xirmada Datacom, ka dibna 2000 waxay iibsanaysaa Spectra Precision iyo TDS, 2003 Nikon; gudaha 2004 MENSI, GeoNav; ee 2005 Pacific Crest, MTS iyo Technologies Apache iyo Applanix.
Kadibna 2006 wuxuu iibsanayaa APS, XYZ, Quantm, BitWyse Eleven, Meridian iyo liiska liiska ... taas oo ay ku jiraan kuwa ugu dambeeya Definiens ee 2010. Marka iibka Ashtech ee 2011 waa wax ka badan iibka cusub -dabcan, iyada oo aan lahayn Magellan oo hore loo iibiyay-.
Nidaamyadani badanaa maaha kuwo tiknoolajiyado cusub ah laakiin kuwa ay noqdaan kuwo aan qarsooneyn. Trimble ayaa iibsanaysa Ashtech si loo kordhiyo tartanka tartanka Spectra Precision, maaha in la dilo tiknoolajiyada BLADE, sida aan fahamsanahay ilaa hadda, waxaan arki doonaa dambe.
Isku-darka Ashtech's baaxadda ballaaran ee waxsoosaarka GNSS iyo shabakadda qaybinta caalamiga ah ee Spectra Precision waxay ku siin kartaa sahamiyaasha xulashooyin cusub oo xiisa badan oo wax ku ool ah.
Tani, waxaa cad in aanu dib dambe u arki doonin Mobile Moodle 6 oo ahayd Magellan, oo kaliya line cusub oo la yiraahdo Mobile Mapper 10 iyo Mobile Mapper 100. MM100 horayba Waxaan eegay Dhowr maalmood ka hor, waxay bixisaa 40 cm ee navigation iyo in ka yar 10 cm oo leh dib-u-marinta; halka MM10 uu aad u yaryahay laakiin wuxuu noqon doonaa mid aad u suuq geynaya ujeedooyinka caleemaha reer miyiga ah:
Waa in la arkaa, laakiin waa inaad qiyaastaa koox ka mid ah US $ 1,500 ama wax ka yar, WindowsMobile oo furan, kamarad, software gis ah, dib u hagaajin iyo inaad dhejin karto barnaamij xog ururin oo loogu talagalay saldhigyada bluetooth. Hantid xoog leh oo ka dhan ah US $ 2,400 ama ka badan oo kharashka ku iibin lahaa rakibaha iyada oo aan macquul aheyn GPS GIS. Waxba ma aha in la sameeyo fudud ee Mobile Mapper 6, in kastoo tani taageerto RTK; qalabeeyaha xarunta leh qalabkan iyo barnaamijka Sokkia SSF ayaa la sameyn karaa
Sida dhinaca mid ah Sheega 3 kaas oo la jabiyay in la baabi'iyo, waxaan kaliya arki doonaa Promark 100 iyo Promark 200. Farqiga labaad ee kan ugu horreeya waa in PMK200 ay la shaqeyso laba jeer laba jeer oo GPS ah, ama GLONASS iyo GPS oo isdaba joog ah. Ka taxaddar, kuma adkeysan karto GLONASS laba jeer oo isdabajoog ah.
Laakiin inta u dhaxaysa GLONASS / GPS oo ah hal mar iyo GPS oo ah laba jeer isbeddel, waxaan jeclaan lahaa ikhtiyaarka labaad -ugu yaraan cisbitaalka tropics ee Maraykanku ma jiraan wax kale oo badalaad ah-.
Hanti-gelinta iyo Mobile-ga Gadiidka 100 labadaba waa qalab wax ku-ool ah iyo hardware. Si qalad ah, waxay yihiin qalab lagu miisaami karo, arrin ka mid ah qaabeynta, laga bilaabo MM100; markaa waxaad iibsan kartaa anteenada dibadda ee labo jeer (waxaa jira Promark), haddii aad rabto wax badan waxaad ku biirin doontaa barnaamijka geodheerka ah ee ururiyaha iyo ka dibna RTK oo aad leedahay koox weyn.
Waxaan rajeyneynaa in iibsigu yahay midka wanaagsan.
Post Previous«Previous Dhibaatooyinka, dhibaatooyinka caamka ah
Post Next Ugu fiican ee Zonum ee CAD / GISNext »
Hal Jawaab u Jawaab "Trimble waxay iibsataa Ashtech; maxaan filan karnaa? "
Mario Reina O isagu wuxuu leeyahay:
Macluumaad aad u fiican, mahadsanid